Ganzabee Dibaabaa Paris Diamond League injifatte - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Ispoortii Atleetiksii Ganzabee Dibaabaa Paris Diamond League injifatte
Ganzabee Dibaabaa Paris Diamond League injifatte
Almaaz Ayyaanaa 2ffaa ta'uun xumurte
Falamiin mt5000 jidduu dubartootaatti guyyaa har’a magaalaa Paaris dirree Staad di Fransitti geggeeffame irra jireessatti akkuma eeggametti kan xumurame. Fiigichi kuni akkuma durumaa kaase tilmaamame guutummatti kan geggeeffame Ganzabee Dibaabaafi Almaaz Ayyaanaa jiddutti. Dhumarratti, kan moo’atee ol’aantummaa mirkaneeffate Ganzabee Dibaabaati- daqiqaa 14:15,41 fiigicha rawwatte. Morkattuun isii cimtuun, Almaaz Ayyaanaa, garaagarumaa sekondii 7n moo’atamtee 2ffaa ta’uun xumurte. Galgala atleetota keenyaa ture jechuun nidanda’ama.
Wonti eeggamee osoo hinta’in hafe jira. Innis rikordii mt5000 Xurunesh Dibaabaa erga 2008 qabatte gadi hinlakkisu jette atleetonni kunniin harka isiitii baasuun ammas isaaniif hinaanjine. Addunyaanis kan eege guyyaa har’aa waatu ta’a jedheeti. Isaan lameenis kanuma abdatanii woljajjabeessaniiti dirree kan seenana. Kana dhugoomsuuf alteetonni lamaanuu dirree irratti hedduu carraaqan. Baay’ee funduratti ufdhiiban. Waan qaban hunda laatanis, ammatti rikoordii Xurunesh fooyyessuuf hinmilkoofne. Hanga wolakkeessa fiigichaatti rikoordiin kancabu fakkatee ture; ija isaanii qofatti osoo hintaane nuu worra taa’ee ilaaluttis. Garuu, gara dhumaatti atleetonni lameenuu humna rikoordicha ittiin burkuteessan fixachuu irraa kan ka’e rikoordichi akkuma jirutti hafe. Tarii yeroo itti aanu itti milkaayu ta’a.
Fiigicha mt5000 guyya hara’aa ta’etti kanaan sadarkaan 3ffaafi 4ffaa harka worra Keeniyaatti kan kufe. Sadaffaa ta’uun kan fiigicha xumurte Mersii Cheronoodha.
Simbiree Tafariifi Galatee Burqaas 5ffaafi 6ffaa ta’uun wolmorkii xumuraniiru.
Previous articleYunivarsiitiin Kalifoorniyaa onnee namtolcheetti fayyadamuun umrii dhukkubsattuu dheeresse jedha
Next articleItoophiyaa keessatti gatiin meeshaalee bara kana %10.4 dabale